Fampianarana ambony - Mahatratra 320 ireo voka-pikarohana asehon'ny mpianatra ao amin'ny ISPM - Book News Madagascar
Publié juillet 4, 2019 par Book News
Mpianatra maro eo anivon’ny sekoly ambony ISPM no mampiranty ireo voka-pikarohany araka ny lalam-piofanana misy azy avy mandritra ny 2 ka hatramin’ny 6 jolay eny amin’ny ISPM Ambatomaro Antsobolo.
Fampirantiana ireo voka-pikarohana
Nanomboka omaly ary tsy hifarana raha tsy amin’ny Sabotsy 6 jolay izao ny fampirantiana ireo voka-pikarohan’ny mpianatra eny amin’ny ISPM (Institut Supérieur Polytechnique de Madagascar) Ambatomaro Antsobolo.
Tanora maro manaraka ny lalam-piofanana « Informatique, Marketing, Finance, Droit, Tourisme, Economie, Génie Civile, Pharmacologie » no maneho ireo voka-pikarohany ireo.
Famoahana ny tetikasan’ireo mpianatra ny taona voalohany ka hatramin’ny taona fahadimy no atao mandritra ity hetsika ity. Mitondra voka-tsoa ny fisian’izao fanehoana ny voka-pikarohana izao Fahombiazana ny fanehoana ny voka-pikarohana nokarakarain’ny ISPM nandritra 26 taona nisiany izay.
Nilaza ny Talen’ny Fitantanana ara-bola eo anivon’ny ISPM, Razafindrahety Aimée fa « maro ireo mpianatra nahavita namorona asa na orinasa ho azy manokana. »
Razafindrahety Aimée, Talen’ny Fitantanana ara-bola eo anivon’ny ISPM. cc: Sary nomena
Sehatry ny NTIC (Sehatry ny teknolojia sy ny fifandraisana) sy ny PME (Orinasa madinika sy salatsalany no tena maro mpanangana. Misy ihany koa ireo Orinasa mitady ireo mpianatra nohon’ny fahaiza-manaony.
Ankoatra izay dia azon’ny rehetra arahina ao amin’ny pejy Facebook « ISPM- Institut supérieur polytechnique de Madagascar Officiel » ny mombamomba ny hetsika fampirantiana sy ny momban’ity sekoly ambony ity.